रेखाको प्रश्न 'जनताले आफ्नो धैर्यताको सिमा तोडने बेला आएन र ?'
सिने संचार संवाददाता	Posted on १० जेष्ठ २०७८, सोमबार
काठमाडौं | कोरोना महामारीले गर्दा देशका जनताले अनेकौं कठिनाइहरु सामाना गरिरहेका छन् । अक्सिजन, एम्बुलेन्स र हस्पिटल बेडको कमीले दैनिक दुई ढाइसय नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, यस्तो दु:खको घडीमा राजनैतिक दलका नेताहरुको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रणमा जानु पर्नेमा सत्ता हटाउने र जोगाउने खेलमा केन्द्रित छ ।
यसैकुरालाई मध्यनजर गर्दै अभिनेत्री रेखा थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यस्तो समस्याको समयमा देशको राजनीति र राजनैतिक दलका विषयमा प्रश्न गर्दै आफ्नो कुराहरु व्यक्त गरेकी छिन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन् “देश कोरोनाको बैश्विक महामारी कहाली लाग्दो आतंकमा परेको छ । मानवजाती र महामारी बिचको लडाईंमा आ-आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका रोटी सेक्ने लाजमर्दो दौडधुप पनि चलेकै छ ।
नागरिकको जीवन रक्षा गर्नको लागि सबै दलले भोट र विश्वाश त पाएकै छन (आकार फरक होला)। प्रधानमन्त्री फेरिएर कोरोना भाग्ने होइन होला र अर्को सरकार वा चुनाव भएर पनि जमिनी यथार्त फेरिदैनन ।
हामी नेपाली र यो राजनीतिले आफुलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सोच्ने, बोल्ने र तर्क गरुन्जेल आम जनता सधैं निरिह रैति मात्र हुने भये । यस्तो बेलामा पदको पछाडि होइन आफुले पाएको मत र मतदाता बचाउने जिम्मेवारीमा अगाडि उभिनु पर्ने होइन र ?
लाखौं मान्छेले मत दिएका माननिय अनी पार्टिहरु- गुनासो र गाली गर्ने चौतारो हुन ? लास हरुले पनि हृदय नछुने पापी ब्यबस्थामा अब राजनीति झन घ्रिणित हुने देखिन्छ । यिनी अनुहार सिंहदरवार छिरेको कती वर्ष भयो ?
जनताको रक्षाको लागि यिनिहरुले आफ्नो आफ्नो पालामा के के गरेका थिए ? अस्पताल र स्वास्थ्य प्रणाली यस्तो बनाउन को को जिम्मेवार छन ? हिसाब ब्यक्ती र ब्यबस्था दुइटैको हुनु पर्छ । जनताले आफ्नो धैर्यताको सिमा तोडने बेला आएन र ?”
Previous Post‘मेरो जिन्दगी रहेसम्म म समाजप्रतिको जिम्मेवारी भुल्ने छैन’ : श्वेता खड्का